600 Deg Deg::Axmed Karaash oo la Saaray Xayiraad Iyo Mooshin Miiska Saaran, | khaatumo news online
Deg Deg::Axmed Karaash oo la Saaray Xayiraad Iyo Mooshin Miiska Saaran,
May 17, 2020 - 18 Aragtiyood
Xiisada Madaxweyne Ku xigeenka Dawlada puntland iyo Madaxweyne Deni ayaa meel Qarar gaadhay saacadihii ugu Danbeeyay,
Madaxweyne Karaash ayaa Maanta Tacsi udiray Gudoomiyaha Gobolka Mudug ee puntland oo Qarax ku dhintay.
Tacsida Karaash ayaa la mariyay Tv-ga puntland iyo Webseti-ka Puntland balse nasiib daro Madaxweyne Deni waxaa uu Amar ku siiyay In laga tirtiro Tacsida Karaash diray Wakaaladaha wararka ee Dawlada taaso lama filan ku noqotay Karaash,
Dhanka kale waxaa caawa la saaray Madaxweyne karaash Xayiraad dhaqaalle iyo mid Socdaal.
Laamaha Dawlada Puntland ee kala duwan ayaa lagu Wargaliyay in aysan ka amar qaadan karaash ilaa amar danbe sidoo kale Bankiga Dawlada iyo Wasaarada maaliyadda ayaa mar lagu siiyay in aysan wax xidhiidh ah la samayn Karaash,
Xog ay helaso Khaatumo News Ayaa sidoo kale sheegaysa in bisha Lixaad 15 keeda La qorsheenaayo In mooshin Laga keeno Axmed Karaash hadii uusan intaas ka horaysa noqon Qoorkeen u hogaansama Awaamiirta Xukumada Deni.
Xaalada Ayaa ah mid cakiran ilaa hadana wax War ah kama soo bixin madaxweyne Karaash
Wixii Soo kordha isha ku Hay Khaatumonews.com
Maxaa kala haysta beesha Majeerteen oo Punland u arkaysa maamul ay iyagu dhsteen, beesha balaadhan ee Dhulbahantana u aragta beel aka soo jeeda jamhuuriyadda Somaliland oo aan la isku halayn karin.
somaliland waa jifo Direed oo duday waana la xaal marin. Laakiin waxaa yaab ah in dhulbahante PL oo cadawgooda siyaasadeed ee 1aad ah ay la shaqeeyaan. Waa inuu karaash taageeraa khaatumo state, ali khaliifna kasoo baxaa SL oo cududa laisku geeyaa si isaaqland meesha looga saaro, markaas ayuu dhulbahante degi.
Ha noolaato jamhuuriyadda xoogga badan ee Somaliland iyo 18 May, difaac ciidan qoraran. Farmaajo iyo Khayre ayaa naxdiintii ay ka qaadeen awoodda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somalialnd la jiifa oo lagu tilmaamay ciidanka uugu awoodda badan Geeska AFrika marka laga reebo Itoobiya taas oo Farmaajo iyo maamulkiisa taagta daran ku riday khalkhal iyo quus.
Horaa soomaalidu u tidhi baqal fardo la daaqdey faras ayey ismoodaa.
Ninkii kheyrkii loo xiirow adna soo qoyso,
Karaash waabuu ku raagey boqortooyada MJ.
Waryaadha joojiya dacaayada dadka iyo dalkuba waa Puntland. Karaash xiniinyuu KU fadhiyaa meesha waana geesi geesi dhalay Puntlander ah.Mana dhacayso in mooshin laga keeno. Kuwiina maalinba meel u hayaamaya dalka dhigtay wax khaatumo la yidhaa ma jirto oo adeer Cali baa iibsaday
Ma bislid intaad weli waxaan jirin iyo khaatumo ka hadlaysid. Socon weynaye aan orodno weeye xaalkaagu. Runta u soo noqo oo xaqiiqda wajah adeer.
Waar maxaa mooshinka lagaga qaraarinyaa!
Deni (oo aan waxar lagu aaminin) baa intuu soo hor istaagay ku yiri SSDF iyo dawladihii MUSUQMAASUAQA ahaa, ee ilaahay willkii Mareexaan ee SIYAAD BARE u soo diray, dadkay ugu fiicnaayeen. Oo weliba u raaciayay Dhulbahante waa ARGAGIXISO.
Waxay nimanku ogaadeen waxa ay yihiin, ee sidaa ulamay hadleen. Maxay marka awalba meesha la joogeen? Awalba doorashooyinkaa loo haystay, hadana filimkaasi waa dhamaaday.
HORTO SSDF TU QOLAMAY AHAAYEEN WALIGAY MAAN MAQALE.
Axmed karaashow maqaayadda ciyaarta ka daa. Wasaaradda maaliyadda aad maalin walba leedahay lacag keena ogow dukaankaas Faroole, baa ilaashada oo iska leh.
Hadda wixii ka dambeeya waa in runta loo sheegaa Karaash, oo aaminsan in maqaayada la wada leeyahay, cali khaliifna hargeysa ayuu ku waashay maqaayad la wada leeyahay baan rabnaa. War nimanyohow is qabta oo ogolaada xaqiiqda. Labadan maamul waa Soomaalidiid waana isbaaro loo dhigtay dawlada Soomaaliyeed. Marnaba suurta gal maaha in qabiil dawlad noqdo
Soomaaliya cadow baa ku habsaday shisheeyaha u adeega oo dalkooda iyo dadkooda neceb, Allah, subxaanahu watacaalaa baa u gargaari doona shacabka Soomaaliya oo ka dul qaadi doona maamul qabiileedyada sida ayyaxa dalka ku habsaday
Kkkkk mooshin aa
Ar waa la soo daaheen mar haddii qaad la waayo waa sidan Oo kale af qushaash ah iyo duwaab.
Boqor jamaal says:
karaash isago dhulbahante ah oo dhulkisi gacan ku hayn buu raba inuu.MaxaMuUD SALEEBAAN amro
😀😀😀WAA WAX LA FILAYEY in KARAASH haddii uu xiniinyo iska baadho la marsiinayo halkii saaxiib kii DHOOBO madaama ay magac u yaal yihiin, RABBOW Goormay waroos iyo dhuloos noqonayaan dad KARAAMO leh oo maqaam Koodii iyo maamuskoodii soo ceshada? 😀😀
AXMED KARAASH, UMA DAAHAYO DENI….
Iska soo buriya awalba culaysbuu idinku hayee
Xoriyo Ibrahim says:
Waryaa dhulbahante dhulkiisi isaaq buusiyey maantana farmajaa soo adeegsadey oo yiri puntilan soo dumiya kamayeelayno 17 iyo Karaaash halz eryo qurunkooda Macau nosheegayaan kursiga madam Wayne kuxigeenka waxaa xaq ule leelkase halasiiyo dhuuni hante hana dhafan
Xoriyo was runtaa leelkasa xaq u leh dhuuni tarxiil